Macsalaama Cabdiweli Gaas: (Faallo Macsalaameyn ah) | Warfaafiye
Warfaafiye Qormooyinka	Macsalaama Cabdiweli Gaas: (Faallo Macsalaameyn ah)
Magacaabista Ra’iisul Wasaaraha cusub, Mudane Abdulkadir Farah Shirdon, kuna magac dheer “Saacid” ayaa waxay daaha ka rogtay in Qarankii Soomaaliyeed uu ka badbaado, in la soo magacaabo Ra’iisul Wasaare kale, oo la jufo ah Cabdiweli Gaas, taas oo haddii ay dhici lahayd, shacbiga Soomaaliyeed, soo xusuusin laheyd oraahdii iyo murtidii baxday, waqti hadda laga joogo nus qarni, laba sanno dhimman ka hor, ( June 14, 1964): “Marna Rashiid marna Risaaq, Inta kale ma rootiyaa”.Haddii afti laga qaadi lahaa, Inta dad oo isugu jiray, siyaasiyiin iyo waxgarad kale, islamarkaasna eegeyeen magacaabista qofka loo wado Ra’iisul Wasaaraha, waxay muujin lahaayeen, aqlabiyan, inay ku codeeyaan Ra’iisul Wasaare danbe in aan laga soo magacaabin deegaanada Abdirahman Faroole maamulo. Sida la hubo horay ayaa looga qancay, mid kasta, Ina C/rashiid iyo Cabdiweli Gaas, howlihii Dowladda ee loo ikmaday inay si qaranimo leh u hoggaamiyaan, uu mid kasta kula leexdo deegaanada ay kasoo jeedaan, iyagoo taasi ka aheyd u daneyn u muuqatay sababo la xiriira qiiro u xambaarinaysay dhanka siyaasadaha qabyaaladdu riixayso.
Waxaa lagu xusuustaa Cabdiweli, inuu markiisii hore xilka ku yimid si kadiso ah, wuxuu shirkii Kampla ku soo dhabar jabshay Ra’iisul Wasaarihii Xukuumaddii Tayo, uuna ka haayay xilka “Portfolio” Qorsheynta Qaranka iyo Iskaashiga Caalamiga ah. Ka hor jagadaas, ma ahayn nin horay looga yaqiin saaxadda siyaasadeed, inkastoo dad yar ay ku barteen, Cabdiweli Gaas, sida daacadda uu uga ahaa, una muujin jiray qiiro saa’id ah, marka uu ka hadli jiray doodihii uu ku taageeri jiray Cabdullaahi Yuusuf xiligii dagaalkii Xoogaggii waddaniyiinta iyo kuwii muqaawamada ay kaga soo horjeedeen duulaankii militari ee Ethiopia ku qabsatay Somalia. dagaalkaas waxaa lagu xusuustaa xasuuq aan loo aabbayeelin in loogu geysto dadweynaha Soomaaliyeed, waxaana ka dhashay burbur aadanimo, laguna tilmaamo mid ka mid ah, kuwa adduunka ugu xun iyo barkac lixaad leh oo 90% wada saameysay muwaadaniyiintii dagganayd Xamar iyo qaybo ka mid ah bartamaha iyo gobollada koofureed ee dalka.
Mudo 15 bilood ah ayuu Cabdiweli hoggaaminayay xukuumad aan lagu faraxsanayn, ku timid heshiis nuxurka qodobadiisa la karahay, kaasi oo lagu magacaabay Kampala Accord iyo tallaabooyinkii heshiiskaasi looga ambaqaadaayay hirgelintiisa, loona bixiyay, wax loogu yeeray, “Road Map” oo waddiiqooyinkii loo maray lagu tilmaamay inay lahaayeen astaamo jahowareer badan dhaliyeen. Waxaa la aaminsan yahay in lagu jaheynaayay danaha dowladaha deriska ah.
Wuxuu heshiiskaasi qeexaayay awoodaha Somalia in laga maamulo dowladaha deriska ah, IGAD iyo Xafiiska UNPOS iyada oo dhinaca kalena lagu sheegay mas’uuliyadda xukuumadda Cabdiweli jirayso in ay noqoto muddo sannad ah, kadibna laga gudbo nidaamka ku meelgaarnimada ah. Laakiinse, waxaa loo maray habab shaki badan dhaliyay, cabsi iyo talaabooyin loo arkaayay inay yihiin kuwo nuxur tirayay qaranimadii iyo sidoo kale, aan hubaal laga bixin, sida dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintoodaba ay uga qayb qaadan lahaayeen aayaha ku wajahan isbaddalada loo nashaqadeeyay inay ka dhacaan dalkooda , kadib markii laga oofsaday Baarlamaankii iyo Dastuurkii muddada 8da sanno ay ka soo shaqeenaayeen guddigii madaxa bannaanaa. Arrimahaasna baddelkooda, waxaa loo maray, marxalado iyo xaalado aan sharci ahayn, sida shirar aan loo wada dhamneyn, qaarkoodna lagu kala qabtay dalalka deriska, sida Addis Ababa iyo Nairobi.
Kampla Accord iyo Road Map-kaba, waxaa lagu tirtiray, axdigii KMG, awoodihii dastuuriga ee Madaxweynaha, Xukuumadda iyo Barlamaanka, xilkoodana waxaa loo wareejiyay koox is-magacawday, lana baxday “Saxiixayaal” oo ah kuwo aan kalsooni looga hayn waxqabadkooda dalka gudahiisa. Cabdiweli wuxuu soo dhaweeyay faragelinta Kenya isagoo ka ahayd in uu si bareer ah uga horyimaado dooddii Madaxweynahiisa kasoo jeediyay soo gelitaanka ciidammada Keenya ee ku soo xadgudubay geyiga Soomaaliyeed, wuxuu kaloo horseeday inuu Sheikh Shariif Sh. Ahmed ku khilaafo amuuro badan oo quseeya amaanka qaranka iyo danaha kale ee dalka, sida dib u heshiisiinta iyo habsami u socodka howlaha Dowladda.
Federaalka oo aan weli loo marin afti dadweyne ee lagu ansixinaayo ayaa waqtigeeda oo aan imaan laga hordhacay, waxaa laga dhigay inuu u jiro si dastuuri ah. Waxay tahay mid lagu tilmaami karo qalad taariikhi ah oo ku wajahan ku takrifal aan sharci ahayn, si ay u timaaddo u faa’ideyn siyaasadeed gobol ka mid ah gobolada dalka, si loogu daneeyo in kaligeed la siiyo awood qeyru caadi ah oo ay kula sinnaato midda sharciga ah ee Dowladda Dhexe, iyada oo dhanka kalena, marka laga fiiriyo dalka intiisa kale oo weli la daalo dhacaayo mid ka mid ah xaaladaha dagaal kuwooda adduunka ugu khatarsan marka laga hadlaayo sida Soomaalida uga go’an tahay la dagaalanka argagixisada caalamiga ah, sida Al-Shabaab iyo Alqaacidda oo kale.
Awood qeybsiga Dowladeed ayaa si xun loo fasiray, dastuur aan aheyn kii Soomaalida muddada dheer ka doodeysay ayaa jeeb laga la soo baxay, waddadii kala guurkana, waxaa loo maray, si ka duwan nidaamkii sharciga. Marxalada kala guurka waxaa sharciyan ahaan lahayd in laga hoggaamiyo dhanka awoodda xeer-dejinta, sida Baarlamaankii, sharci darrada loo kala diray.
Arrimahaasi oo dhan waxay ku yimaadeen, iyadoo loo daneynayo rabitaanka Dowladdaha deriska, oo aan haba yaraatee dooneyn in Soomaaliya ka ka badbaaddo dhibaatooyinkii 20-ka sano ka baday hareysay. Metalan, siiba Kenya waxay istaraatiiji ahaan dooneysay inuu sii jiro qalalaasaha Soomaaliya, sababa la xariira, iney ka faa’iideysato kheyraadka shidaal ee ku jira goobo la hubo ee ka mid ah dhul biyoodka Koonfureed ee Soomaaliya.
Cabdiweli wuxuu xilka ka tegayaa iyada oo Kenya ka xun tahay, ku guuldarreysatay inuu xilka ku soo laabto isagoo mar kale ah Madaxweyne ama ugu yaraan Ra’isul wasaare. Wuxuu ka tagayaa isagoo dalka aan u sameynin ugu yaraan, hal Mashruuc wax ku ool ah si loogu xusuusto, wuxuu kaloo ka tegayaa isagoo qeyb ka noqday fadeexado Masuq maasuq la xiriira lunsasho lacago ku xisaaban kaalmooyin caalami ah, Guddiga la socodka xaaladaha Soomaaliyana, ku shaaciyeen mid ka mid ah warbixinnada ay u jeediyaan Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobay.
Isagoo iinahaasi leh ayuu haddana Cabdiweli wuxuu naftiisa ku boggaadiyay in marxaladii kala guurka uu kasoo qabtay howlo taariikhi ah, hase ahaatee, waxaa beentaa lagu yiri codeyntii xubnaha baarlamaanka ee 10kii Sabtember, taasi oo si qeexan ugu tusaaleeyeen inaan kalsooni lagu qabin murashanimadiisii jagada Madaxweyninimada.
Hadaba, maxaa u bannaan, maadaama uu ku guuldarreystay hamigii ku jiray? Waxaan u furan, fursad ah, inuu dib iskaaga noqdo halkii uu uga yimid summer job-ka waa Buffalo, NY, Mareykanka. Sidoo kale, Maxaa laga fili karaa ninkaan cusub, waa Saacid, ina Farah Shirdoon oo Abdiweli Gas waqtiyo kala duwan isku magaalo kuwada dhasheen, “Dhuusa-mareeb”, isku sannadna ka soo wada qalin jabiyeen Kulliyaddii Dhaqaalaha ee JUS, sannadkii 1983?
Sida dad badan aaminsan yihiin, waxaa la hubaa inuu kaga duwanaan karo xagga waddaniyadda iyo daacadnimada marka laga hadlaayo howlaha xaasaasiga ah kuwooda taabanaya qaranimada ee horyaalaan xukuumadda uu soo dhisi doono. Waxqabadkiisana waxaa loo maleynayaa inuu wax badan soo kordhin karo haddii si wada tashi ah uu u habraaco ballanqaadyadiisa isbeddel doonka ah, sida xaqiijinta arrimaha la xiiira amaanka qaranka, midnimada iyo wadajirka dal ahaaneyd ee Soomaaliya, maamul u sameynta deegaannada laga xureeyay aragagixisada Shabaabka, la dagaalanka musuqmaasuqa, dowlad wanaagga, horumarinta dhinacyada kala duwan ee dalka iyo in la beddelo wejiga xiriirka la leeyahay beesha caalamka iyo kuwa deriska, intaba.
Si uu u xaqiijiyo himilooyinkiisa, si la mid ah sida ina Farmaajo oo kale, wuxuu la imaan doonaa xiriir wada shaqeyn wadareed, kana madaxbannaan is-khilaaf, inay dhemarto isaga iyo Madaxweynaha ama sidoo kale xubnaha xukuumaddisa iyo barlamaankaba. Waxaa kaloo lagu hanweynahay inuu soo bandhigo waxqabad iyo barnaamij siyaasadeed ee tayo leh.
Fadlan hadaad qaadaneyso xigasho ku samey qormada Warfaafiye